Global Voices teny Malagasy » Zo sy Andraikitr’ireo Mpandray Anjara Global Voices · Global Voices teny Malagasy » Print
Zo sy Andraikitr'ireo Mpandray Anjara Global Voices
Voadika ny 19 Jolay 2019 3:24 GMT 1	 · Mpanoratra Sahar Habib Ghazi Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Asongadina ao amin'ny Manifesto Global Voices  ireo tanjontsika sy ny soatoavintsika amin'ny ankapobeny.
Andraikitry ny Mpandray anjara sy ny Tonian-dahatsoratra no mifanerasera amin'ny fomba tia namana sy feno fanajana. Fiarahamonina izay mifototra amin'ny fitokisana sy ny finamanana mihoatra sisintany isika.
Andraikitry ny Tonian-dahatsoratra ny mamaly haingana ny mailaka avy amin'ireo mpandray anjara, saingy tokony ho fantatry ny mpandray anjara fa matetika mivoaka any ivelany ireo tonian-dahatsoratra na mety ho sahirana. Tokony hiteny ny tonian-dahatsoratra rehefa tsy ho hita ao amin'ny aterineto.
Mandefa ny lahatsoratr'izy ireo mba hotsaraina ny mpandray anjara ary ahitsin'ny tonian-dahatsoratra izany. Andraikitry ny mpandray anjara ny mandefa ireo tatitra marina sy mifanaraka izay nohamarinina tsara ireo soratra ary nomanina tamin'ny fahaiza-manao tsara an'ny mpandray anjara.
Ireo tonian-dahatsoratra no tompon'andraikitra amin'ny fanitsiana ireo lahatsoratra ka manaraka ny fenitry ny kalitaon'ny Global Voices ho an'ny votoaty sy ny endrika izy ireo. Tokony hamela ireo mpandray anjara mba hijery ireo fiovana lehibe alohan'ny famoahana ny tonian-dahatsoratra, saingy ny tonian-dahatsoratra no manana fahefana hanova ny endrika sahaza sy mety.
Mamaly ny fanontanian'ireo Lehiben'ny tonian'ny Global Voices ny tonian-dahatsoratra. Raha mahatsiaro sahirana sy miahiahy amin'ny lafiny rehetra amin'ny asa na ny fitantanana Global Voice ireo mpandray anjara, dia afaka mandefa mailaka any amin'ny lehiben'ny tonia mivantana raha mila toro-hevitra na fanelanelanana.
Manana solontena roa voafidy ao amin'ny Biraon'ny Global Voices ireo mpilatsaka an-tsitrapo Global Voices, ary afaka mihaino izay fitakiana na fitarainana izy ireo ary mitondra izany any amin'ny birao raha ilaina.
Mba ho sokajiana fa “mavitrika”, tsy maintsy manoratra matetika (na tsindraindray) ao amin'ny Global Voices ireo mpandray anjara ary mandray anjara araka izay azony atao amin'ny lisitry ny mailaka. Raha toa ka “tsy mavitrika” izy ireo mandritra ny volana vitsivitsy, dia mety ho esorina ao amin'ny lisitry ny mailaka. Saingy afaka miverina ihany ireo mpandray anjara aorian'ny tsy fahitana azy maharitra .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/19/141583/
 Manifesto Global Voices: https://globalvoicesonline.org/about/gv-manifesto/